महिलाहरु बच्चा जन्मिएपछि किन मोटाउँछन् ? यस्तो छ तौल घटाउने उपायहरु Nepalpatra महिलाहरु बच्चा जन्मिएपछि किन मोटाउँछन् ? यस्तो छ तौल घटाउने उपायहरु
महिलाहरु बच्चा जन्मिएपछि किन मोटाउँछन् ? यस्तो छ तौल घटाउने उपायहरु
बच्चा जन्मिएपछि महिलाहरू मोटाउने गरेका छन् । किन भने बच्चा जन्मिएपछि महिलाहरूको शरीरमा परिवर्तनहरू देखिन्छन् । बच्चाका लागि आमाको दुध बढाउने र आमालाई कमजोर हुन नदिन विभिन्न पौष्टिक तत्व हुने खानेकुरा खान दिइन्छ । त्यसले गर्दा महिलाको शरीर बढ्ने गर्छ ।बच्चा जन्मिएका आमाका शरीरलाई घटाउन केही साधारण उपाय गरिएमा शरीर मोटो हुन पाउँदैन ।डेलिभरीपछि महिलाको जिम्मेवारी बढ्दै जान्छ । बच्चाको स्याहारसँगै घरको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले फुर्सद निकाल्न धौधौ पर्न सक्छ । त्यसैले आमाले आफ्नो लागि डेली रुटिन बनाउन जरुरी हुन्छ ।
बिहान उठेपछि बेलुकी नसुत्दासम्मको एक्टिभिटीलाई डेली रुटिनमा राखेर काम गर्दा आमालाई सहज हुन्छ । यस्तो रुटिन बनाउँदा डाइट र एक्सरसाइजका लागि पनि विशेष समय छुट्याउन आवश्यक हुन्छ । प्रेग्नेन्सी र डेलिभरीपछि हेभी एक्सरसाइज गर्नु हुँदैन । त्यसैले वाकबाट एक्सरसाइजको सुरुवात गर्नुपर्छ । यस्तो एक्सरसाइज एकदेखि तीन हप्तासम्म गर्न सक्नुहुन्छ । छिटो हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि निकै ठूलो एक्सरसाइज हो ।
यसो गर्दा सुरक्षित हुनुका साथै थाकेको मसल्सलाई वार्मअप गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यस्तो वेला तपाईं त्यति बलियो हुनुहुन्न, ताकि दौडन सक्नुहोस् । जसकारण ब्रिस्क वाकिङ गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रायः महिलाले गर्भावस्थाका क्रममा दुई गुणाभन्दा बढी खाने गर्छन् । मानिसलाई लाग्छ कि प्रेग्नेन्सीका वेला दुईजनाका लागि खानुपर्छ । जुन गलत हो । यत्ति हो कि यस्तो वेला शरीरलाई अलि बढी क्यालोरीको आवश्यकता हुन्छ ।
ब्रेस्ट फिडिङ गराउनका लागि पौस्टिक आहारको जरुरी हुन्छ । त्यसैले सन्तुलित डाइटका माध्यमले पनि तपाईंले आफ्नो तौल कम गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो समय जे खानुस् तर स्वस्थ खानुस् । र, जंकफुडबाट टाढै रहनुस् । मोनो र पोलिसेचुरेटेड फ्याट शरीरका लागि निकै राम्रो हुन्छ । एभोकाडो, कनोला आयल, ओलिभ आयल, साल्मन आदि फ्याटको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्तनपान नवजात शिशुका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी पौष्टिक आहार हो । त्यति मात्र होइन, स्तनपानले आमाको स्वास्थ्यलाई पनि निकै फाइदा पु(याइरहेको हुन्छ । प्रेग्नेन्सीका क्रममा र डेलिभरीपछि महिलामा फ्याट र कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दै जान्छ । त्यसैले नियमित स्तनपान गराउँदा शरीरको मेटाबोलिजम पहिलेकै अवस्थामा आउन सहयोग मिल्छ र फ्याटको मात्रा पनि कम हुँदै जान्छ ।
डेलिभरी भएका महिलाले आफ्नो डेली रुटिनमा तातो पानी पिउने समय पनि राख्न जरुरी हुन्छ । तातो पानी पिउँदा शरीरका विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । यसले हाम्रो शरीरको तापक्रम र मेटाबोलिज्मको मात्रालाई पनि बढाउने काम गर्छ । जसका कारण बढीभन्दा बढी क्यालोरी जलेर जाने गर्छ । त्यसैले सधैँ सादा नभई तातो पानी पिउन जरुरी हुन्छ ।
प्राणायामजस्ता योगासनले छोटो समयमा तौल कम गर्न सहयोग पु(याउँछ । त्यसैले योग कक्षामा सहभागी हुनुस् र सामान्य योगबाट सुरु गर्नुस् । जसले तपाईंको शारीरिक मात्र नभएर मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदा गर्छ । सेतु आसनजस्ता योगले छोटो समयमा फ्याट कम हुन्छ । स्पट जगिङजो बच्चालाई छाडेर बाहिर जान सक्दैनन्, उनीहरूले घरमा एकै ठाउँमा बसेर पनि एक्सरसाइज गर्न सक्छन् । त्यसका लागि जगिङको सहारा लिन सकिन्छ । तपाईं एकै ठाउँबाट उभिएर दौडने पोजिसनमा रहेर स्पट रनिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।
डेलिभरीपछि स्विमिङ पुलमा तैरिँदा तपाईंलाई निकै आनन्द लाग्न सक्छ । यसले तपाईंको तौल घटाउन पनि सहयोग पु(याउँछ । यसो गर्दा मंसपेशीमा निकै प्रभाव पार्छ र तौल कम गर्न सहयोग पुग्छ । तर, सिजेरियन डेलिभरी गरेका महिलाले भने स्विमिङ गर्नुअघि डाक्टरको सल्लाह लिन जरुरी हुन्छ ।-एजेन्सीको सहयोगमा
विवाहपछि अधिकांस महिला मोटाउने कारण